Ogaden News Agency (ONA) – Saxafiyiinta Qorahay Media oo shir-saxafadeed ku qabtay Nairobi
Saxafiyiinta Qorahay Media oo shir-saxafadeed ku qabtay Nairobi
Sida la wada og yahay waxay saxaafadu gaar ahaan midda Somaaliyeed, maalmihii ugu dambeeyay si buun buunin ah uga hadlaysay arimo ku saabsan in shacabka Somaliyeed iyo shirkadahooda ganacsiga looga uruuriyo dawladda Itoobiya dhaqaale iyada ooy qasab tahay inay bixiyaan dhaqaalahaas.
Dhaca ay Itoobiya ku dhacayso shacabka Somaliyeed, waxay ugu gabbaadaysay inay ka iibinayso Saami (Share) waxay ay ugu magac dartay Biyaxidheen Itoobiya laga dhisayo.
Waxay ugu hanjabaysay shirkadaha Itoobiya ka shaqeeya haddii ayna Saami/Share gadanin inayna Itoobiya ka shaqaynaynin, waa arrin adduunka ku cusub in laysku qasbo Saami in la gato iyo weliba dad aadan xukumin oodan dawlad u ahayn inaad qasabto inay lacag ku siiyaan waana xaq darro aan geed loogu soo gabanin.
Taasi waxay muujinaysaa inuu shacabkii Somaliyeed si toos ah u hoos yimid gumeysiga Itoobiya, waxaa ka mid ah shirkadaha lacaga badan laga qaaday Xawaaladaha iyo kuwa TV yada.
Sidoo kale waxay Saxaafada Soomaaliyed aad uga hadlaysay in dhulka Ogaadeenya ay ka jiraan hormar & barwaaqo waxayna been abuurkaas u sameynayaan iyaga oo qaarna Itoobiya ay laaluushtay sida Universal TV oo isu beddelay TV Itoobiya qaarna ay ku beer laxawsanayaan Itoobiya bal inay iyagana adeegsato.
Dhalinyaro aan tabar iyo waayo aragnimo saxaafadeed lahayn ayaa loo diray Ogadenya si ay meelo loo sii diyaariyey u soo duubaan oo been uga sheegaan horumar aan jirin, waxaana ka mid ah meelaha ay soo duubeen Jeel Ogaden oo ah meel maxaabiista lagu jidh dilo.
Waxaa Jeel Ogaden ku jira dadkii loogu talo galay dad toban jeer ka badan waxayna muddo dheer oo sanooyin ah ku jira dad aan weligood maxkamad la keenin oo layskaga iloobay.
Waxaa Jeelkaas ku jira dad buka oon weligood dhakhtar la gaynin dad badan ayaa ku dhinta oon ehelkoodii la ogaysiinin oo ay weli moodaya inay nool yihiin.
Waxaanu la kulanay dad Jeelkaaas ku jiri jiray oo warbixin naxdin leh ka bixiyey duruufta Jeelka, waxayna yidhaahdeen meel loo sameystay in dadka lagu cadaabo.
Ujeedo: Saxaafadda Soomaaliyeed & Sida ay u dhaqmayso
Kadib markaan aragnay qaar ka mid ah Saxaafada Soomaaliyeed sida ay ugu tumanayaan nidaamkii iyo sumcadii saxaafadeed ee caalamiga taas oo ah nidaam waajib ku ah qofka suxufiga ah in uusan ka gudbin.
Markaan Aragnay sida ay u dhaqmayaan TVyada Soomaaliyeed gaar ahaan TVga Universal & heshiisyada uu la galayo Itoobiya si uu u soo bandhigo Bor-Bogaandada Itoobiya ee beenta ah & in uu qariyo xaqiiqada dhabta ah ee ka Jirta Ogaadeenya, ayada oo laga go’doomiyay dhamaan saxaafada caalamiga iyo kuwa goboleedba.
Markaan aragnay Suxufiyiinta Caalmka sida loola dhaqmayo sidii labadii wariye ee Swedish-ka ahaa ee isku dayay in ay xaqiiqada Ogaadeenya ka jirta soo arkaan soona bandhigaan laguna xukumay xadhig aan cadaalad ku dhisnayn.
Markaan aragnay aqoon la’aanta haysata qaar badan oo ka shaqeeya Saxaafada Soomaaliyeed & sida ay u soo tabinayaan barnaamijyo ka baxsan nidaamka u ayala saxaafada ee ay caalamku ku wada shaqeyaan.
Markaan si mugleh u qiimaynay arimaahas oo dhan markaan aragnay hawl wadeenada Qorahay Media shir deg-deg ayay isugu yimadeen kaas oo ay kaga arinsanayeen arimaha kor ku xusan waxayna soo sareen Baaq & Cambaarayn.
Ururka Suxufiinta Qorahay waxay Cambaaraynayaan dhamaan Warbaahinta u xaglinaysa Itoobiya gaar ahaan TVga Universal oo heshiisyo lagalay Itoobiya kuna dhaqma nidaam ka baxsan xeerka u yaala saxaafada caalamka.
Waxaanu si kulul u Cambaaraynaynaa dhamaan sixun wax u sheega ku ugaadhsada magaca Saxaafadeed isaga oo dano gaar ah ku fushanaya taas oo ah dambi in qofka saxafiga ah uu noqdo shaqsi raqiis ah oo u xagliya Gumaysiga dad shacab ah maalin & habeen tacadiyo joogto ah ku haya.
Waxaan si kulul u cambaanaynaaya ku tumashada ay Itoobiya ku tumanayso xuquuqada uu qofka saxafiga ah leeyahay waxaanan leenahay Itoobiya waa in ay shuruud la’aan soo daysaa labada wariye ee Swedish-ka ah Martin Schibbye & Johan Persson,
Waxaan Cambaaraynaynaa Wariyaasha lagu laynayo dalka Soomaaliya ayaga oo gudanaya waajibka saran ee wariye nimo waxaana leenahay dadka mar walba laynaya wariyeyaasha waa in ay ka waantobaan oo ay joojiyaan.
Waxaan dhamaan saxaafada Caalamka ugu baaqaynaa in Itoobiya lagu cadaadiyo in ay dhulka Ogaadeenya saxaafada u ogolaato xaqiiqada dhabta ah ee ka jirtana ay ka soo waranto.
Sidoo kale waxaan dhamaan Suxufiyiinta Soomaaliyeed meel ay jogaanba ugu baaqaynaa in ay galaan Ogaadeenya ayaga oo soo taabanaya waxa ka jira maxaa yeelay waa dad aad isku mid tihiin dhanwalba, sidii uu u galay Jaamac Nuur Wariyihii Soomaaliyeed ee Al-Jazeera sanadii 2008 oo barnaamijyadii uu soo bandhigay ee xaqiiqada ahaa ay noqdeen kuwa soo jiita aduunka.
Qorahay Media Journalists Group (QMJG) waxay dhamaan suxuufiyiinta Soomaaliyeed ku boorinayaan in ay si dhab ah u midoobaan si caqabdaha & xiliga adag looga gudbo loona xoojiyo waxqabadka & tayada saxaafada Soomaalida waxaa muhiim ah in la helo wada shaqayn & wax wada qabsi.
you did good job but the people of soomaaliya became puppet of woyaane so we need to find out a way to change this problem and bring them to our side